Liyyuu poolisiin naannoo soomaalee Alshabaaba taatee as bahaa jirti. Kichuu
HomeAfaan OromooVideosLiyyuu poolisiin naannoo soomaalee Alshabaaba taatee as bahaa jirti.
OMN: ODUU FUL 12/2018
Ummaanni Erteraa fi Tigraay turtii woggaa 20 booda harra ifaatii daangaa isaan jidduu yeroo banamuutti mirrii ummata lameen jidduu maal akka fakkaatu.
Liyyuu poolisiin naannoo soomaalee #Alshabaaba taatee as bahaa jirti.
Abdi illeen akka gad dhiifamuuf dhaadataa jiru.
Mootummaan Federaalaa waan kana irratti xiyyeeffannoo keennuu barbaachisa.
Via: Kasim Hamda